people Nepal » राजश्व, भंसारदेखि अर्थसम्म सेटिङ ? भन्सारमा दैनिक करोडौं राजस्व छली राजश्व, भंसारदेखि अर्थसम्म सेटिङ ? भन्सारमा दैनिक करोडौं राजस्व छली – people Nepal
राजश्व, भंसारदेखि अर्थसम्म सेटिङ ? भन्सारमा दैनिक करोडौं राजस्व छली
Posted on February 5, 2018 by Purna Nanda Joshi
बिराटनगर । बिराटनगर भन्सार कार्यालयबाट करोडौं रुपैयाँ भन्सार छली गरी सामान आयात हुने गरेको छ । भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत मिमांस अधिकारी, भन्सार अधिकृत सुशील थापा, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्वको क्षेत्रीय कार्यालय इटहरी र पथलैया राजस्वका दिब्यराज पोखरेलको सेटिङमा अति न्यून बिजकीकरण गरी दैनिक बीसौं ट्रक सामान भित्रिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
बिराटनगर भन्सारबाट भित्रिने सामानमा २५ प्रतिशतमात्र लिएर ७५ प्रतिशत भन्सार छली हुने गरेको दावी स्रोतको छ । रसुवा भन्सारबाट आउने ट्रकमा मूल्यांकनमा सानो त्रुटि फेलापरे पनि दैनिक ट्रक समातेर ब्यापारीलाई दुःख दिने राजस्व अनुसन्धान विभागले बिराटनगरबाट ७५ प्रतिशत भन्सार छली गरी भित्रिएका ट्रकलाई निर्वाध भित्रिन दिएको गुनासो छ । बिराटनगर भन्सारबाट एउटा कन्टेनरमा ब्यापारीले ६५ हजारदेखि ८५ हजार डलरको सामान ल्याएका हुन्छन् । तर एक कन्टेनर बराबर भन्सार मूल्यांकन ८ देखि बढीमा १५ हजार रुपैयाँको मात्र गरेर अरु लाखौं रकम खल्ती भर्दै आएको आरोप छ ।
बढीमा १५ हजारको भन्सार तिरेर ६५ हजार डलरको सामान विना भन्सार आयात गरी देशको करोडौं, अर्बौं रुपैयाँ राजस्व मार्ने काम भइरहेको छ । जाँचपास गर्दा सन्दर्भ मूल्यको २५ प्रतिशत मात्र मूल्यांकन कायम गरी प्रति कन्टेनर ३ लाख रुपैयाँ सम्म घुस लिने गरेको आरोप भन्सार प्रमुख मिमांस अधिकारीमाथि लागेको छ ।
बिराटनगर भन्सारमा ब्यापारीले ठूला मानिसले लगाउने पाइन्ट ल्याएको छ भने मिलेमतोमा प्रज्ञापनत्रमा इलाष्टिक पाइन्ट र कट्टु लेखी भन्सार छली गर्दैआएका छन् । टिसर्टहरु पनि ठूला मानिसले लगाउनेलाई बेबी भनेर राजश्वमार्दै भित्र्याउने गरेका छन् । ठूला मानिसले लगाउने पाइन्टको प्रति पीस ३ डलर भन्सार तिर्नुपर्छ । तर इलाष्टिक पाइन्टको ४५ सेन्ट भन्सार तिरे हुन्छ । कट्टुको त १७ सेन्टमात्र तिरे हुन्छ । यसरी एउटा पाइन्ट बराबर २.८३ डलर भन्सार छली बिराटनगरबाट हुँदै आएको सुरक्षा स्रोतले बताएको छ ।
ठूला मानिसको मोजा ल्याए पनि बेबी मोजा उल्लेख गरी भन्सारछली हुन्छ । बेबी मोजाको ४ सेन्टमात्र भन्सार लाग्छ भने ठूला मोजाको ३० सेन्ट भन्सार शुल्क लाग्छ । ठूला मानिसले लगाउने स्पोर्ट जुत्ताको प्रति जोर ४ डलर तिर्नुपर्छ तर बेबी भनेर १.५० डलरमात्र तिर्छन् । बिराटनगर भन्सारबाट यसरी दैनिक भन्सार छली हुने गरेका यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् । यसरी दैनिक करोडौं रुपैया“को भन्सार शुल्कमा लुटतन्त्र बिराटनगरबाट भन्सारछली हुँदै सामान आयात भइरहेको छ ।
ठूला मानिसले लगाउने मोजा ल्याउ“दा पनि बेबी मोजा भनेर छुटाउने गर्दछन् । सर्ट पाइन्टदेखि रेडिमेड कपडा सबैमा यसरी भन्सार छली हुने गरेको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालय, भन्सार विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियारजस्ता निकायले बिराटनगर भन्सारबाट भित्रिने एउटामात्र ट्रकको खानतलासी लिने हो भने प्रज्ञापनपत्रमा एउटा र सामान अर्कै भएको फेलापर्नेछ । तर, भन्सार विभागदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागसम्म सेटिङ भएकाले ७५ प्रतिशत भन्सार छली गरी ब्यापारीले निर्वाध सामान भित्र्याइरहेको स्रोतको दावी छ ।
यसरी दिनमा दसौं ट्रक रेडिमेड कपडा चीनबाट बिराटनगर हुँदै भित्रिने क्रममा करोडौं रुपैयाँ भन्सारछली हुँदा पनि राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भुपाल बराल मौन रहनु र बेखबर हुनुमा राजश्वमाराहरुसंगको सेटिंगले काम गरेको प्रहरी स्रोत बताउछ ।
न्यून बिजकीकरण गरी भन्सार छली गरेबापतको रकमको ६० प्रतिशत ब्यापारी र ४० प्रतिशत भन्सारका प्रमुख मिमांसु अधिकारीले लिने गरेका छन् । भन्सार प्रमुख अधिकारीले नै राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागदेखि इटहरी र पथलैयासम्मका राजस्व अनुसन्धानको इकाइहरु मिलाउने गरेको स्रोतको दावी छ । मिमांसु अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख दीप बस्न्यातका पीए लक्ष्मण बा“स्तोलाको भागमा पनि कमिसन पु¥याउने गरेको भन्सार स्रोत बताउछ । यसरी बिराटनगर भन्सारबाट निर्वाधरुपमा तस्करी चम्किए पनि राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना भने मस्तराम शैलीमा बसिरहेकोमा अर्थ कर्मचारीहरु छक्क पर्ने गरेको स्रोत बताउछ ।
मिमांस अधिकारी लगातार आकर्षक भन्सार कार्यालयमा बसेर करोडौं कमाउदै मस्ती गर्दै आएका सौभाग्यशाली उपसचिव हुन् । उनी बीरगंज, कृष्णनगर, तातोपानीपछि बिराटनगर भन्सारको प्रमुखमा सरुवा भएका हुन् । राजस्व समूहका अकूत सम्पत्ति कमाउनेमा मिमांस अर्थमन्त्रालयमा पाँचभित्रै पर्ने स्रोतको दावी छ ।
यसअघि तातोपानी भन्सारको मूल ढोकामा सशस्त्र प्रहरीका जवान र कार्यालय सहयोगीले बरामद गरेको १७ किलो सुनमा काठमाडौंमै भए पनि सुराकी भत्ता लिन खोज्दा मिमांस अधिकारी झन्डै अख्तियारको कारबाहीमा परेका थिए । सुन बरामद हुँदा मिमांस अधिकारी काठमाडौंमा भएको कलडिटेलबाट देखिएपछि अख्तियारले उनीमाथि छानबिन गरेको थियो । कृष्णनगर भन्सारमा समशेर मियाँसंग मिलेर मिमांस अधिकारीले तस्करीको संजाल नै आरोप पनि लागेको थियो। । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीका भाइ मृगेन्द्र कार्कीलाई घुस बुझाएर उनी बिराटनगर भन्सारको प्रमुखमा सरुवा भएका हुन् । पटक पटक आकर्षक कार्यालयमा बसेका मिमांस अधिकारीलाई पुनः बिराटनगर दिनु नहुने आवाज मन्त्रालयमा उठे पनि अर्थ मन्त्री कार्कीले चर्को दबाब दिएर सरुवा गरेका थिए ।
संसदमा कांग्रेसको अवरोधका बीच पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी
नेकपा कार्यदलमा तीन गुटका तीन सुर, नेतृत्व हत्याउन अहिलेदेखि नै कसरत
सुमार्गीको बैंक खाता रोक्का राख्न निर्देशन